MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA LABRABULL IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Labrabull iyo Sawirro
Labrador Retriever / Eeyga Mareykanka ee loo yaqaan 'Bull Bull Terrier' isku dhafka ah eeyaha
Ben Labrador Retriever / Pitbull Terrier mix at 15 bilood jir
Labrabull ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Labrador dib u habeyn iyo Godka Dibida Maraykanka . Habka ugu fiican ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah in laga fiiriyo dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha lagu arko nooc kasta oo ka mid ah noocyada isku-dhafan. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
'Tani waa Momma oo jirta 2 sano. Iyadu waa kala badh Labrador iyo badh God dibi . Ninkayga iyo aniga waxaan ka soo badbaadinay Bulshada Aadanaha. Momma waa eey aad u macaan oo eyda iyo bisadaha la jaan qaada !! '
shukulaatada shaybaarka sawirada qasan
Moose the Pit Bull / Labrador mix (Labrabull) da'da 8 sano
Boomer Labrabull (Pitbull / Labrador mix) markay jiraan 10 bilood
Millie the Labrabull (Pitbull / Labrador mix) da'da 2 sano
Isku darka Labrador Retriever / Pitbull isku darka 1 sano jir
'Tani waa Titan, oo ah taalada ardaaga. Isagu waa toddobo jir Pit Bull / Lab isku dhaf ah waana ilmaha ugu weyn ee aad waligaa la kulanto! Wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro casaankiisa Bear oo casaan ah oo uu fadhiisto cidhifka afaafka hore ee balbalada isagoo daawanaya baabuurta iyo dadku ag marayaan. '
Eygaygu waa Solo iyadu waa a Pitbull / Shaybaarka isku dhafan, oo lagu muujiyey halkaan markii uu jiro 1 sano. Waxaan ka helay iyada markii ay 10 toddobaad jirsatay hoy badbaado oo ay ku dhalatay.
- AAD u ciyaar badan oo tamar badan leh
- wuxuu isku dayaa inuu la saaxiibo xayawaan kasta (bisadaha, eeyaha, qorraxda, bakaylaha iwm)
- aad ula saaxiib ah dadka, carruurta iyo waayeelka (boodboodo wax yar markuu yaraa, laakiin waligiis carruurta kuma yeesho) - xitaa aad u jilicsan carruurta dhasha iyo dhallaanka
- Wuxuu jecel yahay biyaha iyo barafka
- kuma fiicna nolosha guryaha dabaqyada yar
- wuu ciyi doonaa haddii wax la maqlo habeenka, ama haddii albaabka la garaaco, laakiin aan la maqal xayawaan weyn
- AAD si fudud u tababaran, wuxuu jecel yahay inuu sameeyo khiyaanooyin loogu talagalay daaweynta, caqli badan! (maahan dhibaatooyin badan oo eey ah - oo laba maalmood gudahood ku qoran)
- waxay daadisaa qaddarka caadiga ah
- dulqaad xanuun badan, oo xoog badan (iyo DEGDEG!)
-eeyga Comedian, wuxuu jecel yahay inuu kaa qosliyo
- waxay noqotey mid difaac ah markii eey kale uu isku dayey inuu la dagaallamo Jack Russell marka laga reebo inay jeceshahay eeyaha kale oo dhan.
- markay tahay 1 sano culeyskeedu waa 55 rodol.
- walaalaheed waxay ahaayeen madow, madow iyo cadaan, midab, cawl iyo bunni
-wax kalgacal leh, waxay muujisaa kalgacalka ugu badan milkiilaha halkii qof walba laga jeclaan lahaa. '
'Kani waa saaxiibkayga ugu fiican Eli. Wuxuu ku saabsan yahay 9 bilood sawirkan. Hooyadiis waa shaybaar shukulaato ah aabihiisna waa Bull Bull. Ma hubo halka ay ka yimaadeen dhagahaas waalan, laakiin waa muuqaalkiisa ugu soo jiidashada badan. Eli wuxuu iga dhigay Guri-Bull-a-phobe hore (haa, ereygaas waan sameeyay). Waxaan ka mid ahaa dadka ku adkeystay Pit Bulls in loola jeedo dabeecad ahaan. Ma jiraan wax intaa ka sii fog oo runta ah. Waxaan lahaan jiray shaybaar huruud ah oo huruud ah, eeyga 'reerka' u eg. Eli wuxuu leeyahay dhammaan halyeeyada Labrador ee halyeeyga ah, caqliga iyo jacaylka nolosha, oo ay weheliso macaan aan la rumaysan karin, dabeecad kalgacal iyo daacado daacadnimo ah oo aan ehelkeygii hore 'qoyskeyga' weligood yeelan. Isaguna waa ilaaliye aad u fiican — aad u feejigan oo waxyaalaha kor ku xusan markay shisheeyayaashu ku soo dhowaadaan, haddana isla markiiba wuu nasan doonaa oo wuxuu u tegi doonaa hab wanaagsan ee doggie isla marka uu isla markiiba iga helo dareenka ah in qofkani caadi yahay. Ma diidi doono inay jiraan noocyo fara badan oo cajiib ah oo halkaa ka jira, laakiin markii la i waydiiyo, waxaan kula talinayaa Labrabull mar kasta. Wuxuu jecel yahay jimicsi badan oo wuxuu jecel yahay socodka, gaar ahaan markaan u fasiri karo xadhigiisa inuu ordo. Qeybta ugu hooseysa: Wanaagsan ... Doggie ... Ever! '
jack russell cocker isku dhafka spaniel
Eli Labrabull oo ah eey
Buddy Rugta Shaybaarka markay jiraan 18 bilood
Eeg tusaalooyin badan oo Labrabull ah
Sawirada Labrabull 1
Labrabull Sawirada 2
Liistada Eeyda loo yaqaan 'Pull Bull Mix Breed Dogs'
Cadaadiska Qaabka Ontaariyo
saldhig eey of dabada bararsan
sawirada mastiff dibi
min pin isku qasan dachshund
shaxda cabbirka tilmaanta gaaban ee Jarmalka
sawirrada eeyaha isbaanishka
shiinays shiin badeed pu pei
godka shar shar pei mix